Kalfadhiga 6-aad ee baarlamanka oo la waqtiyeeyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kalfadhiga 6-aad ee baarlamanka oo la waqtiyeeyey
Mareeg.com: Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay waqtiga uu furmayo kalfadhiga 6-aad ee baarlamaanka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in 20-ka bisha April ee socota uu furmi doono Kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya.
Jawaari ayaa go’aankaan uga dhawaaqay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, halkaasoo uu Guddiga Axsaabta ee Baarlamaanka ugu soo xiray kulan howleed muddo u socday.
Xoghayaha Guud ee Baarlamaanka Soomaaliya, C/kariin Xaaji Cabdi (Buux) oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in Guddoonka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu u go’aamiyay furitaanka Kalfadhiga 6-aad ay noqoto 20-ka bishan April oo ku beegan maalinimo Isniin ah.
“Waxaan doonayaa in aan ku wargeliyo dhammaan Xildhibaannada Qaranka in furitaanka Kalfadhiga 6aad ee Baarlamaanka loo asteeyey 20-ka bishan April oo ku aadan maalin Isniin ah waxaana laga codsanayaa dhamaan Xildhibaannada Baarlamaanka inay soo xaadiraan munaasabadda furitaanka Kalfadhiga 6aad oo lagu qaban doono xarunta Golaha Shacabka” ayuu yiri Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay ku jiray fasx, waxaana haatan sii dhamaanaya xilligii fasaxa.
Magacyada wadaado dowlada Kenya lacag ka xayirtay